Shil Tareen oo labo qaybood u kala jaray bas ay la socdeen ciyaale iskuul fara badan (Daawo Sawirro) – Xeernews24
Shil Tareen oo labo qaybood u kala jaray bas ay la socdeen ciyaale iskuul fara badan (Daawo Sawirro)
Shil tareen oo naxdin leh ayaa ka dhacay dalka Faransiiska ka dib markii ay fooda is dareen tareen iyo bas ciyaale iskuul marayay degaanka Perpignan oo ku yaalla Koonfurta dalkaas.
Ugu yaraan afar carruur ah ayaa ku dhimatay, iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacantay 20 kale oo 11 ka mid ahna ay xaaladdoodu tahay mid aad u liidatoo.
Waxaa shilkani uu ka dhacay meel ay isku waydaartaan wadooyinka Millas iyo Saint-Féliu-d’Amont.
Baska ayaa waday arday ay da’doodu u dhaxaysay 13 iyo 17 sanno oo uu ka soo qaaday iskuul aan ka fogayn meesha uu shilku ka dhacay, iyadoo sawirro goobta laga soo qaaday ay muujinayaan baskii oo labo u kala go’ay.
Shirkadda tareennada ee SNCF ayaa sheegtay in ay dajisnaayeen waxyaabihii loogu talagalay in ay xanibaan baabuurta kale tilmaamayayna in tareenku uu meesha marayo, inkastoo aan arrintaas wali la xaqiijinin.
Baska ayaa marayay isgoyska marka uu shilku dhacay, waxaana la sheegay in si fiican wax loo arki karay, waxaana tareenka la socday dad rakaab ah oo gaadhaya 30 qof, iyadoo uu weli socdo baadhitaan ku saabsan qaabka uu shilkaas u dhacay iyo sababta ka dambeysa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/TARE-2.jpg 424 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-15 12:02:572017-12-15 12:02:57Shil Tareen oo labo qaybood u kala jaray bas ay la socdeen ciyaale iskuul fara badan (Daawo Sawirro)
Hogaamiyaha Xisbullah oo ku hanjabay in Maraykanka iyo Israel uu burburin d... Shacabka reer Saylac oo saluug xoogan ma muujiyey saamiga laga siiyey xukumadda...